Ghana: Italiana ve i Mario Balotelli sa Ghaneana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2010 6:14 GMT
Italiana ve i Mario Balotelli sa Ghaneana ? Izany no fanontaniana mipetraka nahatonga adihevitra mafana amin'ny aterineto . Mpilalao baolina kitra mpamono baolina, milalao ho an'ny tanànan'i Manchester i Mario Barwuah Balotelli . Nateraky ny mpifindra monina Ghaneana tany Italie izy? Na izany aza, ny olana ara-pahasalamana nanohintohina ny ainy no nampitodika ny ray aman-dreniny tamin'ny asa sosialy ary taty aoriana dia noraisina fianakaviana italiana iray an-tànana izy. Lasa olom-pirenena Italiana izy tamin'ny taona 2008.
Ndeha hojerena ny hevitr'ireo mpitoraka bilaogy sy ireo mpamaky mikasika izany olana izany . Atombotsika amin'i Abena Serwaa izay manontany hoe , “Anisan'ny ao amin'ny Ghana-Deniers Club (Klioban'ireo mitsipaka an'i Ghana) ve i Mario Balotelli kely?”Atombony amin'ny famaritana ” ireo fomba fitafin'i Mario avy any amin'ny tany mafana “ny lahatsorany :
Avy eo izy manontany hoe:
Mpamaky iray hafa izay milaza tena ho The other Mike no tsy manaiky. Tsy mampaninona izay zom-pirenena nofinidiny, manoratra i The Other Mike, tsy maintsy hisy hanontany foana izy hoe , “Avy aiza ny firenena tena niavianao ?”:
Nanoratra lahatsoratra mikasika an'i Mario Balotelli ihany koa ny mpitoraka bilaogy i Nana Sarpong : Ilay Tovolahy Barwuah nanjary lehilahy Balotelli. Hitany ho toy ny zazakely mikorontan-tsaina miezaka ny mahalala ny tenany i Mario :
Araka ny filazan'i Nana, nilaza tamin'ny Ghana Football Association i Mario fa mbola tsy nahare mikasika io firenena io mihitsy !: